सम्प’र्कका बे’ला महि’लाको स्त’न मि’च्दा के हुन्छ ? भिडियो भिडियो – Sidha Post 24
सम्प’र्कका बे’ला महि’लाको स्त’न मि’च्दा के हुन्छ ? भिडियो भिडियो
काठमाडौं । महि’लाहरुले आफु’लाई फि’ट राख्नको लागि अने’क मे’हनत गर्छन । महिलाहरु आफू सु’न्दर हुनका लागि ब्युटि’पार्लर जान्छन् । फेसि’यल, स्क्र’ब र विभिन्न खाले अ’नेक उ’पाय अपनाउँछन् । आफ्नो स्वा’स्थ्यको लागी महिलाहरु जि’म जाने, यो’गा गर्ने र स्वस्थ खाना खान्छन् ।
तर, आफ्नो स्त’नलाई क’सरी स्व’स्थ राख्ने भन्नेमा अ’नभि ज्ञ नै छन् र खासै केहि पनि गरेको दे’खिदैन । स्त’न म साजमात्रै यौ’न साम’थ्र्यको लागि मात्र नभएर विभिन्न स्वास्थ्यमा पनि फाइदा पुग्ने अध्यनबाट खुल्न आएको छ । जब महिलाहरुले क’सिलो लुगा विशे’षगरी ब्रा लगाउँछन तब ब्रेस्टमा लिम्फै’टिक फ्लुइ’डको काममा रोकावट आउँछ ।
जसले गर्दा ब्रे’स्ट र अन्डर आम्र्समा भएको लि’म्फ वा लसी’का फ्लु’इडलाई फेरी स्टिम्युलेट गर्नका लागि स्त’न म’साज गर्नु आवश्यक छ । कहिलेकाहीं स्त’नमा गाँ’ठो बन्न जान्छ यो आफैलाई थाहा हुँदैन । पछि त्यही गाँ’ठो विस्तारै क्या’न्सरमा परि’णत हुन्छ । निय’मित स्त’न मसाज गर्यो भने आफैले गि’र्खा वा गाँ’ठो समयमा नै पत्ता लगाउनाले तुरु’न्त उपचार भई ख’तराबाट बच्न सह’ज हुन्छ । बदा’मको तेल, तिलको तेल, जो’जोबा आय’ल वा क्या’स्टर आयल’ले स्त’न मसाज गर्नु बढी फाइ’दाजनक हुन्छ । य
स्तै, नुहाइ सकेपछि हातमा ते’ल लगाएर हातले स्त’न माथी गो’ला’कारमा म’साज गर्नुहोस् नुहा’उन चाहानुहुदैन भने स्त’नलाई तातो तौ’लिया राखेर हल्का ता’तो गनुहोस् , मसाजको मोश’नलाई कम से कम ३० पटक सम्म माथी र तलको दिशा’मा पनि गर्नुपर्छ । यति नै भन्ने छैन तर १० देखि १५ मिनेट हरेक दिन सु’त्नु भन्दा पहिले स्तन मा’ड्नु लाभ’दायक हुन्छ । स्त’न मा’ड्दै यौ’न सम्प’र्क गर्दा पनि धेरै कुराको लाभ हुन्छ ।
दु बैमा भएकी नेl पाली चेl लीको हेर्नै नl सकिने मात्र ५९ सेl केन्डको भिl डियो लि’lक भयो “उl मेर पुगेका ले मात्र हेl र्नु होला”